Group Policy — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော် Group Policy ကို လျှောက်ရှာကြည့်လိုက်တာ တော်တော်လေးကို အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်. အရင်တုန်းကတော့ Folder Options, Task manager, Run box, cmd ဘာညာကွွိကွ လောက်ပဲ လုပ်လို့ရမယ်ပဲ သိထားတာ . ထဲထဲဝင်ဝင် သေချာလိုက်မကြည့်မိဘူးဗျ. သေချာဝင်ပြီး အသုံးဝင်မှန်းသိသွားပေမယ့်လဲ နောက်သုံးတဲ့အခါ ဘယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ ပြန်ရှာရမှန်း မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတော့ . အချိန်ကုန်တာပေါ့. ကျွန်တော့်လိုပဲ သူများတွေ အချိန်မကုန်ပဲနဲ့ Group Policy ကို လိုသလို ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်အောင်လို့ ကျွန်တော် လမ်းကြောင်းလေးတွေကို ပြန်ထုတ်ပြီး ရေးထားတာပါ. ဆရာလုပ်တယ်လို့တော့ မထင်ကြပါနဲ့ဗျာ. ကိုယ် ဒုက္ခရောက်သလိုမျိူး သူများတွေ ဒုက္ခမရောက်အောင်လို့ပါ.
Download Link: http://www.4shared.com/file/251687124/5be3d18f/Group_Policy.html